DHAGEYSO: Cumar Filish ”Magaalada Muqdisho waa hooyada magaalooyinka Soomaaliya oo dhan” – HalQaran.com
DHAGEYSO: Cumar Filish ”Magaalada Muqdisho waa hooyada magaalooyinka Soomaaliya oo dhan”
June 28, 2020 July 2, 2020 HalQaran Staff	1 Comment Cumar Filish, Dal jirka Daahsoon, matalaada gobolka banaadir, taageeray
Muqdisho (Halqaran.com) – Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) ayaa Khubaduu ka jeediyay taalada Daljirka Daah-soon ee Degmada Boondheere ee uu ka socday Banaanbax lagu taageerayo ansixinta matalaadda Gobolka Banaadir ee Aqalka Sare ee dalka.
Cumar Filish oo la hadlaayay boqolaal dad shacab ah oo isugu soo baxay fagaaraha Daljirka Daah-soon ayaa waxaa uu sheegay inuu soo dhaweynayo go’aankii Xildhibaanada Golaha Shacabka ay matalaadda Gobolka Banaadir ku siiyeen 13 xubnood ee Aqalka Sare ee dalka.
Duqa Muqdisho ayaa sheegay in Gobolka Banaadir uu yahay caasimadda dalka Soomaaliya ayna muhiim ay tahay in Aqalka Sare Kuraas ku yeesho kuwaasi oo ku hadlaya codka bulshada Gobolka.
Wuxuu xusay, Cumar Filish, in tallaab geesinimo leh ay qaadeen Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah.
“Magaalada Muqdisho waa hooyada magaalooyinka Soomaaliya oo dhan, waa magaalada dadka Soomaaliyeed oo dhan, waana hooyada calanka Soomaaliyeed waa meesha kaliya ee shanta Soomaaliyeed aysan ku dareemin in laga leeyahay oo ay ku dareemaan inay iyagu leeyihiin taas ayaa mudan in lagu qiimeeyo Muqdisho” ayuu yiri Cumar Filish oo maanta khudbad ka jeediyay taalada Daljirka Daah-Soon.
← AKHRISO: War-murtiyeedka Shirkii Madaxda Galmudug iyo Puntland & Qodobbadii ka soo baxay
Muxuu ka yiri Xasan Sheekh hadalkii Xaliimo Yareey ee doorashooyinka Qaranka? →
UPDATE: Dowladda Jarmalka oo diiday in Mareykanka uu cunaqabateeyo dalka Ciraaq
January 6, 2020 January 11, 2020 Weriye Ahmed Abdi 0
December 8, 2019 December 8, 2019 Weriye Ahmed Abdi 0
VIDEO: Wasaarada Caafimaadka oo ka warbixisay dadaallada lagu ballaarinayo xarumaha lagula tacaalayo bukaanada Covid-19
One thought on “DHAGEYSO: Cumar Filish ”Magaalada Muqdisho waa hooyada magaalooyinka Soomaaliya oo dhan””
Waa la ogyahay, lamana diidana in maqaamkeeda la cayimo. ha ahaatee Dastuurka wadankau deggan halagu socdo , dadka aad leedahay hooyey u tahay talada maqaamka wax halaga siiyo iyada oo la raacayo qodobada sheegaya, inaka daaya huuhaada, Farmaajio dabada ka riixayo ee uu danaha khaaska ka lahaa.